လမ်းဘေးမှာ ချမ်းလွန်လို့ကွေးအိပ်ပျော်နေတဲ့ လူတစ်ယောက်ကို စောင်သွားခြုံပေးပြီး ပိုက်ဆံတွေပါ ထားပေးခဲ့တဲ့ Sinon ရဲ့ ဗီဒီယိုလေး – Cele Snap
လမ်းဘေးမှာ ချမ်းလွန်လို့ကွေးအိပ်ပျော်နေတဲ့ လူတစ်ယောက်ကို စောင်သွားခြုံပေးပြီး ပိုက်ဆံတွေပါ ထားပေးခဲ့တဲ့ Sinon ရဲ့ ဗီဒီယိုလေး
ပရိတ်သတ်ကြီးရေ…. ဖိလစ်ပိုင် Cat Walk King လို့လူသိများတဲ့ Sinon Loresca ကတော့မြန်မာနိုင်ငံကိုရောက်ရှိလာခဲ့တာဆိုရင်အချိန်တစ်နှစ်ကျော်တောင်ရှိသွားခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာပြည်ကိုချစ်တဲ့ Sinon ကမြန်မာပရိသတ်တွေရဲ့ချစ်ခင်အားပေးမှုကိုလည်း သူ့ရဲ့မွန်မြတ်တဲ့ လုပ်ရပ်လေးတွေကတစ်ဆင့် ရရှိခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ် ။ Sinon က စိတ်ထားကောင်းပြီး ကြင်နာတတ်သူတ စ်ဦးဖြစ်တာကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံမှာနေ ထိုင်တဲ့အချိန်မှာလည်း သူတတ်နိုင်သလောက် အလှူအတန်းတွေပြုလေ့ရှိတာပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။
Sinon က အမှန်တကယ်ဒုက္ခရောက်နေတဲ့ လူကြီးလူငယ်၊ ကျားမမရွေး ဘယ်သူ့ကိုမဆို အကောင်းဆုံးအားပေး ကူညီတတ်တာပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ ဒါကြောင့် Sinon ကိုဆိုရင် ပရိသတ်တွေအားလုံးက ချစ်ခင်လေး စားရပြီး သူ့ရဲ့ကောင်းမွန်တဲ့အပြုအမူတွေအတွက် အမြဲတမ်းချီးကျူးနေကြတာ ဖြစ်ပါတယ် ။ အခုလည်း Sinon က လမ်းပေါ်မှာ အနွေးထည်တွေ၊စောင်တွေမပါဘဲ တစ်ယောက် တည်းအိပ်နေတဲ့ လူတစ်ယောက်ကို ကူညီပေးလိုက်တာ ဖြစ်ပါတယ် ။
Sinon ကတော့ ချမ်းလွန်းလို့ ကွေးအိပ်နေရရရှာတဲ့သူကို အနွေးဓာတ်ရစေဖို့ သူကိုယ်တိုင်ဂရုတစိုက်နဲ့ သေသေချာချာလေး စောင်ခြုံပေးခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ ဒါ့အပြင် Sinon က သူ့မှာပါလာတဲ့ပိုက်ဆံအိတ်ထဲက ငါးထောင်တန်တွေကိုထုတ်ပြီး အိပ်နေတဲ့သူရဲ့ဘေးမှာပါ ထားပေးခဲ့သေးတာလည်း ဖြစ်ပါတယ် ။ ကဲ ပရိသတ်တွေကိုပါ ကြည်နူးပီတိတွေဖြစ်စေခဲ့တဲ့ Sinon Loresca ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကို အောက်မှာ ပြန်လည်မျှဝေေ ပးလိုက်ပါတယ်နော် ။ဖတ်ရှုပေးတဲ့ ပရိတ်သတ်ကြီးကို အထူးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်…။
ပရိတျသတျကွီးရေ…. ဖိလဈပိုငျ Cat Walk King လို့လူသိမြားတဲ့ Sinon Loresca ကတော့မွနျမာနိုငျငံကိုရောကျရှိလာခဲ့တာဆိုရငျအခြိနျတဈနှဈကြျောတောငျရှိသှားခဲ့ပွီဖွဈပါတယျ။မွနျမာပွညျကိုခဈြတဲ့ Sinon ကမွနျမာပရိသတျတှရေဲ့ခဈြခငျအားပေးမှုကိုလညျး သူ့ရဲ့မှနျမွတျတဲ့ လုပျရပျလေးတှကေတဈဆငျ့ ရရှိခဲ့တာ ဖွဈပါတယျ ။ Sinon က စိတျထားကောငျးပွီး ကွငျနာတတျသူတ ဈဦးဖွဈတာကွောငျ့ မွနျမာနိုငျငံမှာနေ ထိုငျတဲ့အခြိနျမှာလညျး သူတတျနိုငျသလောကျ အလှူအတနျးတှပွေုလရှေိ့တာပဲ ဖွဈပါတယျ ။
Sinon က အမှနျတကယျဒုက်ခရောကျနတေဲ့ လူကွီးလူငယျ၊ ကြားမမရှေး ဘယျသူ့ကိုမဆို အကောငျးဆုံးအားပေး ကူညီတတျတာပဲ ဖွဈပါတယျ ။ ဒါကွောငျ့ Sinon ကိုဆိုရငျ ပရိသတျတှအေားလုံးက ခဈြခငျလေး စားရပွီး သူ့ရဲ့ကောငျးမှနျတဲ့အပွုအမူတှအေတှကျ အမွဲတမျးခြီးကြူးနကွေတာ ဖွဈပါတယျ ။ အခုလညျး Sinon က လမျးပျေါမှာ အနှေးထညျတှေ၊စောငျတှမေပါဘဲ တဈယောကျ တညျးအိပျနတေဲ့ လူတဈယောကျကို ကူညီပေးလိုကျတာ ဖွဈပါတယျ ။
Sinon ကတော့ ခမျြးလှနျးလို့ ကှေးအိပျနရေရရှာတဲ့သူကို အနှေးဓာတျရစဖေို့ သူကိုယျတိုငျဂရုတစိုကျနဲ့ သသေခြောခြာလေး စောငျခွုံပေးခဲ့တာပဲ ဖွဈပါတယျ ။ ဒါ့အပွငျ Sinon က သူ့မှာပါလာတဲ့ပိုကျဆံအိတျထဲက ငါးထောငျတနျတှကေိုထုတျပွီး အိပျနတေဲ့သူရဲ့ဘေးမှာပါ ထားပေးခဲ့သေးတာလညျး ဖွဈပါတယျ ။ ကဲ ပရိသတျတှကေိုပါ ကွညျနူးပီတိတှဖွေဈစခေဲ့တဲ့ Sinon Loresca ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကို အောကျမှာ ပွနျလညျမြှဝေေ ပးလိုကျပါတယျနျော ။ဖတျရှုပေးတဲ့ ပရိတျသတျကွီးကို အထူးပငျကြေးဇူးတငျရှိပါတယျ…။